अचम्मको ग्रीस। रूसी लागि भिषा: विवरण र कागजात सूची
ग्रीस - प्राचीन वास्तुकला को सुन्दर स्मारक, असामान्य स्वादिष्ट परम्परागत भाँडा र राम्रो गुणस्तर होटल संग एक अद्भुत देश। यो कसरी सुन्दर बगैंचा प्राप्त गर्नुभयो? सपना पूरा गर्न पहिलो चरण भिसा बन्नेछ।
आश्चर्यजनक छुट्टी यसको सबै अतिथिहरूको ग्रीस वर्तमान। रूसी लागि भिषा प्रस्ताव धेरै सजिलो र यस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका वा संयुक्त राज्य रूपमा केही अन्य देशहरूमा भन्दा छिटो छ कि यो अचम्मको देशमा धेरै गाह्रो छैन।
देश को भाग हो को सेन्जेन को क्षेत्र सम्झौता यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् उपयुक्त आवश्यकता गर्न एक भिसा, र यसैले। Kos, कोर्फू, कोरिन्थ रोड्स, क्रेते (भिसा नै सबैतिर) - - यो भर्ना प्राप्त को सरल विधि यसको कन्टिनेन्टल वा insular भाग मा परमिट किन्न छ विभिन्न ठाउँमा धेरै ग्रीस दिनेछु। भ्रमण अपरेटर वा एजेन्सीको यात्रा खरीद गर्दा रूस प्राप्त लागि भिषा थप सम्भावना छ। सकारात्मक निर्णय प्रतिशत ग्रीक वाणिज्य दुतको कार्यालय अनलाइन संसाधन को मद्दत यसको दर्ता को आत्म को एक प्रयास को मामला मा भन्दा एकदम उच्च हुनेछ।
मुख्य कागजात सूची
प्रमाणपत्रहरू र कागजातहरू सूची किनभने यो युरोपेली देश को आतिथ्य द्वारा विशेषता छ, धेरै ठूलो छैन - ग्रीस! रूसी लागि भिषा त मूलतः कागजातहरू सूची जस्तै इटाली, स्पेन वा डेनमार्क अन्य देशहरूमा, संग नै छ, एक सेन्जेन आवश्यक छ।
साधारण राहदानी। यो सानो पुस्तक को एक महत्वपूर्ण सुविधा एक यसको म्याद समाप्त हुने मिति पोषित छ - राहदानी यात्रा कम्तिमा तीन महिनाको लागि मान्य हुनुपर्छ पछि।
पुरानो राहदानीको फोटोकपी खारेज। तपाईं कुनै पनि देश भर्ना व्यवस्था गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिले प्राप्त सेन्जेन भिसा उपस्थिति ठूलो प्लस छ।
एक वाणिज्य दुतको कार्यालय प्रदान गर्दछ जो प्रश्नावली-प्रोफाइल। आवेदक हस्ताक्षर चार स्थानमा राखिएको छ। मुद्रण गरेको कागज को2अलग पानाहरू मा dvuhstronney मुद्रण-प्रयोग गर्नुपर्छ।
नक्कली मा रंग फोटो। प्रत्येक कार्ड पछाडि तपाईं पूर्व स्वीकृति अनुरोध र अन्तिम राउन्ड पर्यटक को संख्या हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। फोटो कडाई आवश्यकताहरु पालना हुनु पर्छ: मैट सतह मा कुनै ovals र कोण, र अनुहार क्षेत्र को बारे 70-80 प्रतिशत कवर गर्नुपर्छ। एक व्यक्ति खुला र प्राकृतिक, कि छ हुन, झुर्रियाँ को retouching बिना, उदाहरणका लागि, birthmarks छ वा।
आन्तरिक रूसी पासपोर्ट को प्रत्येक पृष्ठ को फोटोकपी।
रोजगारीको प्रमाणपत्र कम्पनी लेटरहेड मा। कागजात हेडर सबै सम्पर्क नम्बर र कम्पनी जानकारी समावेश गर्नुपर्छ। र सहायता सामग्री तपाईं तलब, स्थिति, सही जारी मिति, काम समय आकार निर्दिष्ट र छुट्टी को अन्त पछि आवेदक जब बचत गर्न सुनिश्चित गर्दछ पर्छ।
यो वाणिज्य दुतको कार्यालय आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न ध्यान आवश्यक छ, थप तिनीहरूले धेरै छन्। लगभग सबैको ग्रीस जस्तै देश जाने सक्नुहुन्छ!5रूस भिसा वर्ष अक्सर सेन्जेन क्षेत्रमा पहिले प्राप्त धेरै-प्रविष्टि भिसा उपस्थिति खुल्नेछ।
जसको लागि सुविधाहरू भिसा नागरिकहरु अठार को उमेर गर्ने हासिल गरेको छैन
मुख्य सूची Kiddies साथै कागजातहरू एउटा जन्म प्रमाणपत्र को फोटोकपी प्रदान गर्नुपर्छ।
दुवै आमाबाबुको Notarized सहमति वा आमाबाबुको एक (पराई बाहिर निस्कन साथ एक बच्चा को मामला मा) (बच्चा मात्र एक आमा, वा विपरित संग, छोडेर छ भने पोप संग)।
स्वाभाविक, छोराछोरीलाई जागिर प्रमाण प्रदान गर्न असमर्थ छौं।
माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation असाधारण भिसा
Accommodation लातविया Accommodation - यो प्रायद्वीप Halkidiki तीन औंलाहरु को एक। यहाँ साधारण मानिसहरूलाई पहुँच अस्वीकार गर्दै किनभने माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation को क्षेत्र मा त्यहाँ धेरै गाह्रो छ। यो यस्तो ग्रीस रूपमा देश को पवित्र भाग हो। यहाँ प्राप्त गर्न रूस लागि भिसा अनुमति छैन। द्वीप पहुँच मात्र यस्तो अधिक चार दिन भन्दा एक अवधिका लागि धर्मशास्त्र, दर्शन र अन्य विज्ञान को संकाय मा भर्ना भएका शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू, वा विद्यार्थी अनुमति छ।
इच्छित सहिष्णुता को लागत
तसर्थ, निर्देशन छ - ग्रीस alluring छ। रूसी लागि भिसा (भिसा को सबै प्रकार आधिकारिक disclosed वाणिज्य दुतको कार्यालय को मूल्य) अपेक्षाकृत सस्तो छ। यसको मूल्य यूरो को सम्बन्ध मा भिन्न र क्षणमा2हजार rubles छ। को consular केन्द्र 1 र 1.5 हजार rubles को मात्रा थप शुल्क हुन सक्छ। यो भिसा वा यात्रा एजेन्सी को लागि संगठन हुन कि - - आफ्नो प्रबन्धकहरू अतिरिक्त सेवा शुल्क लगाउन सक्छ तर, यो एक विशेष ठाउँमा संकेत गर्दा त्यो सम्झना गर्नुपर्छ।
वास्तविक यात्री ग्रीस जस्तै देश भ्रमण गर्न चोट छैन। रूसी लागि भिसा एक दुर्गम अवरोध छैन। तर सबै पर्यटकहरु सट्टा नयाँ अनुभव र एक अविस्मरणीय अनुभव गर्नेछन्!
होटल "Yunost" (सेन्ट पीटर्सबर्ग)। प्रयोगकर्ता समीक्षा
स्मारक Aleksandru Nevskomu। रूस मा अलेक्जेन्डर Nevski गिरजाघर
भियना मा बिदाहरू: कसरी विमान टिकट मा सुरक्षित गर्न
ड्यूक विश्वविद्यालय - "शिक्षा पर्ल" अमेरिकी
ट्रेलर "क्रौन": प्राविधिक विनिर्देशों
कसरी घर मा ऊर्जा खपत कम गर्न
दबाइ 'pronoran'। प्रयोगको लागि निर्देशन